Moe၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မိန်းကလေးYangonMyanmar Like0members like this
ဘလော့များ (10)ဆွေးနွေးချက်များ (6)အဖွဲ့များ (11)ဓါတ်ပုံများ (30)Photo Albumsဗွီဒီယိုများ Moe's Likes Moe's ၏မိတ်ဆွေများ
အားလုံးကြည့်ရန်... Moe's Groups
Gtalk/Gmail အကောင့်တွေ f…
ma wah wah
Started this discussion. Last reply by ဦးခင် Feb 9, 2012.5Replies
သဗ္ဗရသံ ဓမ္မရသော ဇိနာတိဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... အားလုံးကြည့်ရန်...
From aye aye myaing
*****အမှောင်ကိုခွင်း အလင်းကိုဆောင် သတ္တ၀ါပေါင်း အေးချမ်းလေအောင် သစ္စာဓမ္မ ဟောပြရှေ့ဆောင် မြတ်ဗုဒ္ဓ ရှိခိုးကြရအောင်*****
Chomar and Moe are now friendsSundayMoe commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post '၁၃၇၅-ခုနှစ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်မည့်ကျောင်းကို အသိပေးကြေညာခြင်း'"တပည့်တော် ၃စုံ လှုဒါန်းပါ့မယ်ဘုရား"May 8dimplemit leftacomment for Moe"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977"Apr 9Moe sharedaprofile on FacebookMoeFeb 19Moe sharedaprofile on FacebookMoeFeb 19Moe commented on dimplemit's blog post 'အလှူတော် မင်္ဂလာပွဲကြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါပြီ။'"သာဓု...သာဓု...သာဓုပါရှင် ကိုယ်တိုင်မပါဝင်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်"Feb 17Moe leftacomment for Ashinkhemeinda"
မင်္ဂလာပါဘုရား ယနေ့ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည်နေ့ရက်တိုင်းကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဘုရား"Feb 13Moe posted photos7more…Jan 29Moe leftacomment for ♣တောသူမလေး♣"မင်္ဂလာပါညီမလေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်"Jan 29♣တောသူမလေး♣ leftacomment for Moe"ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း…"Jan 29Moe leftacomment for dimplemit"မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတွေပို့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မစောရေ"Jan 29Moe leftacomment for hla moe 24"မင်္ဂလာပါ ကိုကြီးလှမိုး မွေးနေ့မှာ အိမ်မှာဘုရားအနေကဇာတင်ပါတယ် အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်ပါတယ်ရှင်
ကိုကြီးလှမိုးလဲ အရာအားလုံးလဲအဆင်ပြေပါစေရှင်"Jan 29hla moe 24 leftacomment for Moe"မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ ညီမရေ..........ဘာတွေ လုပ်ဖို့ အစီစဉ်ရှိလဲး........စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာပါစေ ကောင်းသော လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ..အကြောင်းပြန်ပါ"Jan 29Moe commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် အလှူ အောင်ပွဲ'"အလှုနေ့က အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်"Nov 24, 2012♣တောသူမလေး♣ leftacomment for Moe"
"Oct 30, 2012Moe leftacomment for မင်းမင်း"
ံHAPPY BIRTHDAY"Oct 29, 2012 More... RSS
_origwidth="480" _origwidth="480" _origwidth="446" Moe's ၏ဓါတ်ပုံများ
"၁၅၀၀ အချစ်" နဲ့ "၅၂၈ မေတ္တာ" ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
ဒီဘလော့ကို February 6, 2012 တွင်8:42pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
အချစ်အကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုက "၁၅၀၀ အချစ်" နဲ့ "၅၂၈မေတ္တာ" ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြောလေ့ ရှိကြတယ်။ သမီးရည်းစား အချစ်ကို "၁၅၀၀ အချစ်" ၊ ပူလောင် ပြင်းပြတဲ့ အချစ်လို့ ပြောပြီး . . . မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုတော့ "၅၂၈ မေတ္တာ" ၊ အေးမြချမ်းမြေ့တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုပြီး ယူဆ ပြောဆိုလေ့… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... တစ်သက်တာကုန်ဆုံးခြင်း နှင့် ပြောမယုံကြုံတော့မှကြည့်
ဒီဘလော့ကို February 6, 2012 တွင်8:09pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments
တစ်သက်တာကုန်ဆုံးခြင်း နှင့် ပြောမယုံကြုံတော့မှကြည့်
ဆယ်နှစ်ကလေး ဥာဏ်သေးကွေး ဆော့ပြေးရင်းနှင့်အချိန်ကုန်။
နှစ်ဆယ်တ၀ိုက် အပျော်လိုက် ပိုးပန်းရင်းနှင့်အချိန်ကုန်။
အလှပဆုံး သုံးဆယ်နှုန်း လူလုံးပြရင်းအချိန်ကုန်။…
ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဧည့့့်သည်
ဒီဘလော့ကို January 28, 2012 တွင်4:29pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments
လာတုန်းကလည်းတစ်ယောက်တည်းနော် လက်တွဲခေါ်စရာဖော်မပါလာဘူး ဥစ္စာမပါ လက်ဗလာ...။
ပြန်သွားတော့ လည်း တစ်ယောက်တည်းနော် လက်တွဲခေါ်စရာဖော်မပါဘူး ဥစ္စာကြီးမည်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဘုရားရှင်တို့၏တူညီသောအချက်များ
ဒီဘလော့ကို January 22, 2012 တွင်3:15pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
(၁) အလောင်းတော်သည် နောက်ဆုံးသောဘ၀၌ မိခင်ဝမ်းကြာတိုက်တွင် ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူသည်။ ( ဒီမှာထူးခြားတာက နတ်ပြည်ကနေ စုတေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အလောင်းတော်တွေဟာ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ စုတေပြီး ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူတာမျိုးမရှိပါဘူး..တဲ့ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ လာရင် ကာမဂုဏ်ကို ရွံမုန်းတဲ့ စိတ်အထုံ လူ့ပြည်ကို ပါလာမယ် ။ အဲလိုဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အလောင်းတော်တွေဟာ ဒီလို စောစောစီးစီး ကတည်းက ကာမဂုဏ်ကို ရွံမုန်းနေရင်လည်း မဇ္စိမပဋိပဋာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (119 comments)
9:59am အချိန်April 9, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977 10:37pm အချိန်February 10, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:293069 11:43am အချိန်January 29, 2013, တွင်♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
7:05am အချိန်January 29, 2013, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ ညီမရေ..........ဘာတွေ လုပ်ဖို့ အစီစဉ်ရှိလဲး........စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာပါစေ ကောင်းသော လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ..အကြောင်းပြန်ပါ 12:40am အချိန်January 29, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
Friends18.com Happy Birthday Scraps 4:37pm အချိန်October 30, 2012, တွင်♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ At 10:16pm on October 20, 2012, aye aye myaing gave Moeagift…Red RibbonRed RibbonFrom the Gift Store 10:16pm အချိန်October 20, 2012, တွင်aye aye myaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မိုးရေ နေကောင်းပါသလား မတွေ့ ရတာကြာပြီ မင်္ဂလာပါ 10:24am အချိန်September 27, 2012, တွင်uoaktama မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်အမှတ်အသားမပါဘူး။ ဂျိမ်းဘုရားမှာဘဲပါတယ်။ ကျမ်းမာပါစေ။ 12:23pm အချိန်September 19, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဟယ်.........သနားပါတယ်.......ပီဇာက ကျက်တော့မှာ နောက်ပြီး...ပုဇွန်ဂွက်ကျော်သုတ်နဲ့ 
ရခိုင်မုန့် တီကလည်း ရတော့မှာ ........နောက်တခါပေါ့ မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
padout ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ma nge hlaing
Top News · Everything Soe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ2 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ'2 hours agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ2 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'2 hours agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား2 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား'2 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookမေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း2 hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'2 hours agoThaung Tan liked whitecolor's blog post 'တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ'2 hours agoThaung Tan liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် မင်းကိုဘေးဖယ်'2 hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ'2 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ2 hours ago More... RSS